Any Zeorzia, voatsikera ny boky nosoratan’ny lehilahy misy tantara hankaherezana vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Any Zeorzia, voatsikera ny boky nosoratan'ny lehilahy misy tantara hankaherezana vehivavy
Nitombo ny tsikera fa efa voampanga nanao herisetra ara-nofo ny mpanoratra iray
Voadika ny 12 Aogositra 2021 4:01 GMT
Vakio amin'ny teny Português, عربي, Español, Esperanto , English
“Books HD” avy amin'ny Abee5 nampiasana lisansa CC BY 2.0
Inoana fa nisy ny fikasana tsara tamin'ny “Love yourself,” (Tiavo ny tenanao), boky iray ahitana tantaram-behivavy miisa 13 mitantara ny fanilikilihana izay natrehin'izy ireo noho ny sary mampiseho vatana, nefa voampanga ho manao be marenina sy manavakava-behivavy ny mpanonta azy. The Body Shop Georgia, orinasa Zeorziana sampan'ny orinasa iraisam-pirenena mpanamboatra kojakoja fandroana sy fanatsarana tarehy, ny GrlzWave, vondrona mpiaro ny zon'ny vehivavy, ary ny lapan'ny tanàna Tbilisi no namoaka ilay boky, izay nikendry ny hanohana ny vehivavy amin'ny alalàn'izany, na dia nahazo fanakianana ny tsikera aza izy ireo noho ny fanakarama lehilahy miisa fito hanoratra ny boky ary tsy nanome vola ireo vehivavy mpandray anjara miisa 13.
Nampahafantarina tamin'ny 26 Jolay tao amin'ny lapan'ny tanànan'i Tbilisi, ny “Love yourself” izay mitantara ny fiainan'ireo vehivavy miisa 13, miaraka amina fanehoan-kevitra avy amin'ilay mpanoratra lehilahy Zeorziana fanta-daza iray nandinika ny tantaran'ireo vehivavy na nanolotra ny heviny momba ny zavatra niainan'ireo vehivavy – indraindray anefa izany tsy marina. Vao mainka niharatsy ny tsikera rehefa voampanga ampahibemaso ho nanao herisetra ara-nofo ny iray tamin'ireo lehilahy ireo.
Nilaza ny The Body Shop Georgia, izay niaro ilay boky tany am-boalohany, fa nanandrana naka sary an-tsaina ny tenany tamin'ny toe-javatra niainan'ireo vehivavy fotsiny ireo mpanoratra lehilahy, ary niala tsiny noho ireo tsikera ireo izy ireo taty aoriana. Tsy namidy intsony ilay boky, na dia nilaza aza ny mpitondratenin'ny orinasa fa mbola misy maimaimpoana izany ho an'izay liana hanana dika mitovy aminy. “Iharan'ny hetraketraka sy herisetra mafy indrindra avy amin'ny lehilahy izahay. Tianay [ny lehilahy] hanomboka hiresaka momba izany. Noho io fanehoan-kevitra io, takatray fa diso làlana izahay,” hoy ny mpitondratenin'ny Body Shop tamin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny OC Media.
“Efa ela ny tantaran'ny feminista no nikasa haneho ny fomba fijerin'ny vehivavy. Rehefa manao tetikasa fampaherezana ny vehivavy ianao ary ny fomba fijerin'ny lehilahy mpanoratra no avoakanao ao dia tsy mety izany, tsy amin'ny fo madio ary tsy mahomby,” hoy i Ida Bakhturidze, mpandrindra ny hetsika eo an-toerana, ny Vehivavy Zeorziana ho amin'ny Hoavy Iraisana, tamin'ny OC Media.
Raha niresaka tamin'ny OpenDemocracy, nilaza i Elene Margvelashvili, mpanatontosa sarimihetsika Zeorziana fa tohina izy satria “tsy nisy nahatsapa ny tsy fanomezan-kery ny vehivavy avy amin'ilay [boky]” raha tsy nisy ny tsikera.
Saingy tsy ny fahadisoana tamin'ireo lehilahy nitantara ny tantaran'ny vehivavy ihany no nahazoana tsy fankatoavana fa vehivavy maromaro ihany koa no niteny ampahibemaso taorian'ny namoahana ilay boky fa efa niharan'ny herisetra ara-nofo avy amin'i Giorgi Kekelidze izy ireo, iray amin'ireo mpanoratra lehilahy fito nasongadina tao amin'ilay boky izany. Niditra tao amin'ny Facebook mba hiala tsiny tamin'ny hadisoana nataony taloha i Kekelidze tamin'ny lahatsoratra iray izay nesoriny avy eo, ary nosoloany tamin'ny lahatsoratra iray hafa nitovy tamin'izany.
Raha niresaka tamin'ny OC Media, nanaiky ny mpitondratenin'ny Body Shop fa tsy nandinika tsara ny orinasa. “Rehefa nifantina ny mpanoratra izahay, ny hadisoanay lehibe dia ny tsy fahatongavan'ny vaovao [momba ny fiampangana an'i Giorgi Kekelidze] taty aminay ary tsy nanao fikarohana tsara momba [ireo mpanoratra] izahay.”
Araka ny filazan'ny OC Media, mpanoratra miisa efatra amin'ny fito fotsiny no nilaza ny fandraisan'izy ireo anjara tamin'ilay tetikasa, ny ankamaroany tsy niala tsiny, tsy niraharaha tsikera.
Nilaza ny GrlzWave tao amin'ny fanehoan-kevitra an-tsoratra ho an'ny OC Media fa tsy nanaiky ny fanapahan-kevitra avy amin'ny Body Shop izy ireo handraisan'ny lehilahy mpanoratra anjara hatramin'ny voalohany amin'ilay tetikasa.
Mandritra izany fotoana izany, nilaza tamin'ny Radio Tavisupleba, Radio Free Europe any Zeorzia, ny BodyShop fa nahazo lesona tsara izy ireo ary hampiditra manam-pahaizana bebe kokoa amin'ny tetikasa hoavy.
Raha ny filazan'ny Vehivavy ONU,” mbola mijanona miorim-paka ny fitsaratsaràm-poana amin'ny maha-lahy sy vavy ” any Zeorzia izay mbola matanjaka hatrany ny fomba amam-panao patriarka. Namintina ny fanadihadiana iray hafa, navoakan'ny Banky Iraisam-pirenena, fa na eo aza ny fandrosoana lehibe eo amin'ny fitovian'ny lahy sy ny vavy any Zeorzia dia misy hatrany ny fanamby amin'ny sehatra toy ny fanabeazana, ny asa, ny fandraisana anjara amin'ny politika ary ny hafa, izay mety hikatso na hiova mihitsy aza. ”
11 ora izayKyrgyzstan